justfreeman: april 2011
နိုင်ငံရေးအရ ပူးပေါင်းမှုမရှိဟု ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီများကို ဝေဖန်
လင်းသန့် Saturday, 30 April 2011 18:48
.ရွေးကောက်ပွဲဝင်အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများသည် လွှတ်တော်ပြင်ပ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိ ဟု နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်သည်။
တရားမ၀င်အသင်းများနှင့်မဆက်သွယ်ရဟူသောပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ သတိပေးကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းအဆိုပါ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိမှု ပိုများလာကြောင်း သိရသည်။
တရားမ၀င်အဖွဲ့အစည်းများ၊လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုမပြုကြရန်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၇ ခုကို အစိုးရသစ်၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဧပြီ ၅ ရက် နေ့စွဲဖြင့် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ သတိပေးခဲ့သည်။
“အခုဟာကအစိုးရသစ်အပေါ်သဘောထားတွေ၊တောင်းဆိုချက်လက်မှတ်ထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေ၊စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဆိုင်ရာတွေအပေါ်မှာမတူကွဲပြားနေကြတာပိုထင်ရှားလာတယ်”ဟုနိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးက ပြောသည်။
ယခုတပတ်အတွင်း ဦးသုဝေ ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲဝင် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၁ ပါတီ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ ရုပ်သိမ်းပေးရေး စာရေးတောင်းဆိုမှုကိုလည်း ကျန်အတိုက်အခံအဖွဲ့များက ဝေဖန်ပြောကြားကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့မှ အမည်မဖော်လိုသူ သံဃာတော်တပါးကလည်း ဦးသုဝေတို့ကဲ့သို့ လွှတ်တော်တွင်းမှ နိုင်ငံရေးပါတီများအနေနှင့် တိုင်းပြည်အတွက် လက်ငင်းလိုအပ်ချက်များကို တောင်းဆိုနေသော တခြားသော အင်အားစု အားလုံးနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ ယင်း အစီအစဉ်ကို အစိုးရသစ်က ဖော်ဆောင်ပေးလိုက်ပါက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများကို ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှု ရုပ်သိမ်းပေးရန် စာရေးတောင်းဆိုနေရန် မလိုကြောင်း မိန့်ကြားသည်။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သူ ကိုတိုးကျော်လှိုင်က “အန်ကယ် ဦးသုဝေတို့က အစိုးရနဲ့အဆင်ပြေရေး အရမ်းရှေ့တန်းတင် လုပ်နေတော့ အစိုးရအကြိုက်လုပ်တဲ့သဘော သက်ရောက်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကိုတိုးကျော်လှိုင်ဆက်လက်၍“ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့အတိုက်အခံအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ အခုလုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအပါအ၀င် ပြည်သူ့အသံလှုပ်ရှားမှုအတွက် သူတို့ဆီကိုသွားတယ်။ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေက လောလောဆယ် မပါဝင်လိုဘူးတဲ့၊ ဒါပေမယ့် ကျန်ပါတီဝင်တွေက ပူးပေါင်းပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဦးသုဝေကမူ “ကျနော်တို့က လွှတ်တော်ထဲမှာရော ၊ အစိုးရအဖွဲ့သစ်ကိုရော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတင်ပြတယ်။ အလားတူ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်း တိုက်တွန်းတဲ့ပုံစံနဲ့ ချဉ်းကပ်တယ်။ လုပ်နည်းလုပ်ဟန် မတူလို့ ပူးပေါင်း မလုပ်ဆောင်တာပါ။ သူတို့က တိုက်ပွဲပုံစံဖြစ်နေလို့” ဟု ရှင်းပြသည်။
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူကိုဖြိုးမင်းသိန်းက“နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးအပါအ၀င် ပြည်သူလူထုအသံ လှုပ်ရှားမှုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပထမဆုံး လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ ပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အစိုးရသစ်အပေါ်ပြည်တွင်းအတိုက်အခံအင်အားစုများဖြစ်သည့်၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအပါအ၀င်အဖွဲ့ပေါင်း၁၁ဖွဲ့မှဧပြီလ၂၉ရက်စွဲဖြင့် အသိပေးထုတ်ပြန်ချက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါအသိပေးချက်တွင် အစိုးရသစ်ဆိုသည်မှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ရေရှည်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အကာအကွယ်ယူ၍ ရွေးကောက်ပွဲအမည်ခံကာ ပါတီစုံအဖြစ် ပုံဖော်ထားပြီး ယခင်အစိုးရနှင့် မည်သို့မျှ မပြောင်းလဲကြောင်း ထောက်ပြထားသည်။
ထို့အပြင်အစိုးရသစ်၏အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍လည်းအစိုးရအဖွဲ့တွင်စုစုပေါင်းနေရာ ၃၅ နေရာရှိသည့်အနက်စစ်တပ်မှစစ်ဗိုလ်များက၂၆နေရာယူထားသည်သာမကကျန်သူများမှာလည်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(ကြံ့ဖွံ့ပါတီ)မှသာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုမှအမည်မဖော်လိုသူသံဃာတော်က“လွှတ်တော်တွင်းအတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့အခုအစိုးရသစ်ပေါ်ထွန်းလာတာကိုအပြောင်းအလဲအဖြစ်လက်ခံနေကြပြီး စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရုပ်သိမ်းပေးရေးပဲ သူတို့ အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားလာတာ” ဟု မိန့်ကြားသည်။
အမေရိကန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့၏ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုသည် ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကြန့်ကြာနေရမှုများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများက လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အဆိုပါအရေးယူမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ် ပေါ်ပေါက်စေရေး ဖိအားပေးယန္တရားအဖြစ် ကျင့်သုံးနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသူများက ထောက်ပြသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)အနေဖြင့်အမေရိကန်၊ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်တခြား ဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသော နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ ဖိအားပေးခြင်းအပေါ် ထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ဆက်လက်ထားရှိသင့်ကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မီဒီယာနှင့် မေးမြန်းခန်းများတွင် ပြောဆိုထားသည်။
Posted by justfreeman at 14:430comments
Posted by justfreeman at 14:310comments
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန စနေနေ့၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၂၇ မိနစ် . Buzz
(သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏စီးပွားရေးရာအကြံပေးခေါင်းဆောင်ဦးမြင့်သည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အပြန်အလှန် အကြံပေးခြင်းမျိုး ရှိခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သူတဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ အယ်ဒီတာ့ထံ ပေးစာကို ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။)
ကျနော်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးထင်ကြေးပေး ပြောဆိုနေကြတာကိုလူကြီးမင်းတို့လည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ကျနော့်အနေနဲ့ သူနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဟာ လွတ်လပ် ပွင့်လင်းမှု ရှိပြီးတော့ နားလည်မှုရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ အနေအထားနဲ့ စကားပြောခဲ့ကြတာပါ။ ကျနော်ဟာ သူ့ထက် အများကြီး အသက်ကြီးသူ ဖြစ်ပြီး၊ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခအဖြစ်လည်း ခေတ္တ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူပါ။ သူက အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ကို တလေးတစားနဲ့ “ဆရာ” လို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။
တခါတခါမှာတော့ ကျနော်တို့ စီးပွားရေး အကြောင်းတွေ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ အဲလို အချိန်တွေ ဆိုရင်တော့ ကျနော်က ပိုပြီး စိတ်တိုနေတတ်ပါတယ်။ အဲလို အခါမျိုးမှာဆိုရင် သူကတော့ အေးဆေး တည်ငြိမ်စွာနဲ့ သူပြောချင်တာကို ရွှင်ရွှင်လန်းလန်း ပြောဆိုဆွေးနွေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော့်အနေနဲ့ ‘ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို စိတ်သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားနေတာလဲ” လို့တောင် မကြာခဏ တွေးမိပါတယ်။
စီးပွားရေးဟာ အလွန် အရေးကြီးတာကြောင့် စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေတင် မကဘဲ ကျနော်တို့ အားလုံး အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းကို ကျနော် သူ့ကို ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူကလည်း သဘောတူပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂမှာ ဝါရင့် စီးပွားရေးပညာရှင် တယောက်အနေနဲ့ အနှစ် ၂ဝ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပေမယ့်ကျနော့်ကိုကုလသမဂ္ဂအတွေ့အကြုံ အနှစ် ၂ဝ ရှိခဲ့တဲ့ လူတယောက်အနေနဲ့ မမြင်ဖို့နဲ့၊၁နှစ်အတွေ့အကြုံကိုအကြိမ်၂ဝတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့သူအဖြစ်ပဲသဘောထားဖို့သူ့ကိုကျနော် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့် အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂမှာ အနှစ် ၂ဝ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတာကြောင့် လိုအပ်လာရင် သဘောထားတွေ အယူအဆတွေကို အလွန်ပင် ပျော့ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြား ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်တစား ထင်မြင်ချက်ပေး ဝေဖန်ပြောဆိုကြသူအားလုံးကို လေးလေးနက်နက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားရင်းနဲ့ ကျနော့်စာကို နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။ အားလုံးအနေနဲ့ စိတ်သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အမြင်ကြည်လင်စေရေးအတွက် ကျနော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နောက်ဆုံး ပါးခဲ့တဲ့ စကားလေးကို ဖော်ပြပါရစေ။
“ချစ်ခင်ရပါသောမစုစု၊မိုးဇက်ရဲ့ဂီတကိုနားဆင်ပါ။ကျန်းမာရေးကိုလည်းဂရုစိုက်ပါ။ပြီးတော့မစုစုရဲ့ အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ “servernotfound”တို့၊ “Oops!Youhavebeendisconnected”ဆိုတဲ့စာတွေ တွေ့ခဲ့ရင် သိပ်ပြီး စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့။ အဲဒါက မစုတယောက်ထဲ မဟုတ်ဘဲ ကျနော်တို့အားလုံး အချိန်တိုင်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာပါ။ နွေးနွေးထွေးထွေး ခင်မင်လေးစားလျက် - ဆရာဦးမြင့်”
Posted by justfreeman at 14:230comments
နရီလင်းလက် Friday, 29 April 2011 19:42
အောက်စ်ဖို့် တက္ကသိုလ်တွင် Nursing Management ဘာသာရပ်သင်ကြားနေသည့် မသင်းမာက“တော်ဝင် ဘုရင်မကြီးရဲ့ မြေး မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်သလို ၊ ဘုရင်စနစ်ကိုလေးစားတဲ့ သူတွေက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်တဲ့ပွဲပေါ့။ သတင်းပေါင်းစုံကို နေ့တိုင်းကြည့်နေရတော့ အခု အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အာဏာလုပွဲတွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ညစ်စရာ သတင်းတွေရှိရင်လည်း စိတ်ညစ်ရပြီးတော့ တခါတလေ အခုလိုပျော်စရာမင်္ဂလာသတင်းကို ကြားချင်တယ်ပေါ့”ဟု ပြောသည်။
အကြီးကျယ်ဆုံးသောမင်္ဂလာပွဲဖြစ်သောကြောင့် လန်ဒန်ရှိ လူပေါင်းအားလုံးနီးပါး တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ အိုင်ယာလန်ကဲ့သို့အနီးအနားနိုင်ငံများမှလည်းမင်္ဂလာပွဲသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုသူများ တွေ့ရကြောင်းလည်း သူက ပြောဆိုသည်။
“မင်းသား၂ယောက်လုံးကိုကလေးဘ၀ကတည်းကချစ်တယ်။ဒါ့အပြင်အင်္ဂလန်ရဲ့ဘုရင်စနစ်ကို လေးစားတာရယ်၊ သူတို့ရဲ့ အစဉ်အလာကြီးမားလွန်းတာတွေကြောင့် ဒီပွဲကို လာကြည့်တာ။ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီ ဘုရင်စနစ်ကို ပြောင်းတဲ့နေရာမှာလည်း လူတွေသတ်တာ ဖြတ်တာမရှိဘဲ ညင်ညင်သာသာကူးပြောင်းခဲ့တာတွေကြောင့် လေးစားတယ်”ဟု မသင်းမာက ဆိုသည်။
အဆိုပါ တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲသို့ တက်ရောက်သည့် မြန်မာ အနည်းဆုံး ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ ကြားတွင်ရှိနိုင်သည်ဟု လန်ဒန် အနောက် ဘက်တွင် နေထိုင်သည့် မဖြူ ကလည်း ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“နှစ်ပေါင်း၃၀အတွင်းမှာတော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲကိုပထမဆုံးကိုယ်တိုင်မြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ အရမ်းပျော်မိတယ်။ဒီနေ့ပိတ်ရက်ဖြစ်တော့တချို့ကလည်းနန်းတော် ရှေ့မှာ၊ တချို့ကြတော့လည်း ဘုရားကျောင်းရှေ့မှာတော်တော်များများကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့လာကြည့်ကြမယ်လို့ထင်တယ်”ဟု သူက ပြောပြသည်။
“၀ီလျံက ဘုရင်ဖြစ်မယ့်သူဆိုတော့ အားလုံးက နဂိုကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေတာ၊ သူ့ မင်္ဂလာပွဲဆိုတော့ ပိုစိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့။ကျမဘေးနားကလူတွေဆိုရင်အိုင်ယာလန်ကနေလွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်ကတည်းက ပွဲလာကြည့်ဖို့ ရောက် နေ တာ။ ကိုယ်တွေက နိုင်ငံခြားသား အနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားပြီး ဗဟုသုတ ရအောင် လာကြည့်တာ”ဟု မဖြူက ဆိုသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့(BurmaCampaign-UK)မှ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ဇိုရာ ဖန်းက“လူအရမ်းများတော့ ကိုယ်တိုင်သွားမကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။ အိမ်မှာပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုပြီး တီဗီကနေ စောင့်ကြည့် မယ်။ လန်ဒန်မှာကတော့ ဟိုးရက်တွေကတည်းက လန်ဒန်တမြို့လုံးမှာ မင်္ဂလာပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေတာတွေကို တွေ့နေရ တယ်။ ဒီပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ လူငယ်တွေလည်း တော်တော်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်”ဟု ပြောသည်။
ဗြိတိန် ဘုရင်မကြီး ဒုတိယမြောက် အဲလိဇဘက်(QueenElizabethII)၏မြေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သကဲ့သို့ အိမ်ရှေ့ စံမင်းသားကြီး ချားစ်နှင့်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာတို့၏သားနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည့် ဒုတိယမြောက် တော်ဝင်မင်းသား ၀ီလျံ (၂၈ နှစ်)သည် တွဲဖက် လေယာဉ်မှူး(Co-Pilot)အဖြစ် တော်ဝင်လေတပ်၏ ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေး ရဟတ်ယာဉ် အုပ်စုတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်သည်။
ကိတ် မစ်ဒယ်လ်တန်(၂၈ နှစ်)သည် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပါတီပွဲအတွက် ပြင်ဆင်သည့် ပစ္စည်းများ ရောင်းချသူ ဖခင် နှင့် လေယာဉ်မယ် မိခင်တို့မှ မွေးဖွားလာသည့် သာမန် မိသားစုဝင်တဦး ဖြစ်ပြီး မွေးချင်းညီအစ်မ သုံးယောက်ထဲတွင်သမီးအကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ယခင်ကကိတ်သည်Jigsawအဝတ်အစားကုမ္ပဏီတွင် အဝယ်တော်လုပ်ပြီး ယခု ကျွမ်းကျင်သည့်ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ် ရန် ကြိုးစားနေသူ ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပပြီးပါက မင်းသား ၀ီလျံသည် Cambridgeမြို့စားနေရာကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကိတ် မစ်ဒယ်လ်တန်သည် Cambridgeမြို့စားကတော် နေရာရရှိမည်ဖြစ်သည်ဟု ဂါးဒီယန်း သတင်းစာတွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ မင်္ဂလာပွဲကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးကိုလည်း ဖိတ်ကြားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့(BurmaCampaign-UK)မှ MarkFarmanerက “တော်ဝင်မိသားစု မင်္ဂလာပွဲကို မြန်မာပြည် လို တိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးတွေကို အဓမ္မ ကျင့်တဲ့ ၊ အတိုက်အခံတွေကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ ဒီလို နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြား တဲ့ အစိုးရ တရပ်ကို ဖိတ်တာ ရှက်စရာကောင်းတယ်”ဟု ပြောသည်။
Posted by justfreeman at 15:190comments
ဈေးစည်ပင်ကြောင့် သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ် ဆိုင်ခန်းရှင်များ အခက်ကြုံ
ယုယမိုး Thursday, 28 April 2011 12:56
ရန်ကုန် သီရိမင်္ဂလာဈေးကြီး၏ ဈေးသူဈေးသားများ၊ ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်များသည် ဈေးများဌာန စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ မတရား အခွန်ကောက်ခံမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှု များကြောင့် အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု သိရသည်။
သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ် ဖွင့်ပွဲ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်မြို့၏အကြီးဆုံးကုန်စိမ်းဈေးကြီးဖြစ်သည့် သီရိမင်္ဂလာဈေးကြီးကို ၏၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ကတည်းကရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်မြို့နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ ယခုအထိမပြီးစီးသေးကြောင်း၊ဆောက်လုပ်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းဈေးဟောင်းမှပြောင်းရွှေ့ ရောင်းချလာသူ ဈေးသူဈေးသား များထံမှ ကောက်ခံ နေကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဈေးစည်ပင်သာယာရေးမှ တာဝန်ယူ ကုန်ကျခံရမည့် ဈေးလုံခြုံရေး လမ်း လျှပ်စစ်မီတာခ များအား ဆိုင်ခန်း အကျယ်အ၀န်းကို လိုက်ကာ ပေးဆောင်ရမည်ဟုဈေးစည်ပင်မှထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသီရိမင်္ဂလာဈေးတွင်ကုန်စိမ်းများ ရောင်းချနေသည့် ဦးချိုကြီးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ဈေးသစ်ကို မပြောင်းခင်ကတော့ ဈေးစည်ပင်သာယာရေး ဌာနမှူး ဦးတင်ကိုကို ကိုယ်တိုင်က တည်ဆောက် ရေးတွေ အားလုံးပြီးမှ ပြောင်းရမယ်၊ ဆိုင်ခန်းတွေကို အတိအကျ ပြန်နေရာ ချထားပေးမယ်၊ ဘာအခွန်အခမှ ထပ် မတောင်းဘူးလို့ မနှစ်က မတ်လမှာ အသေအချာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဆိုင်ခန်း ဆောက်လုပ်ရေးတွေ မပြီးသေးခင် ဈေးပြောင်းပေးရတဲ့အပြင်၊ ဆောက်လုပ်ဆဲ ဆိုင်ခန်းတွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေပါ ပေးရတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ယခုလ ၂၃ ရက်နေ့ကလည်း ဈေးလုံခြုံရေး လျှပ်စစ်မီးဖိုးများကို ကောက်ခံသွားကြောင်း၊ အစိုးရ ယူနစ်အတိုင်း ကောက်ခံပါက တဈေးလုံးအတွက် ကျပ် ၈ သောင်း ၀န်းကျင်သာ ကုန်ကျမည် ဖြစ်သော်လည်း ထိုစနစ်ဖြင့် ကောက်ခံခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဆိုင်ခန်းအကျယ်အ၀န်းပေါ် မူတည်ပြီး ကောက်ခံသဖြင့် နစ်နာကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“ဆိုင်ခန်းကျဉ်းရင် တခန်းကို ကျပ် ၅၀၀ နှုန်း၊ ကျယ်ရင် ၁၀၀၀ နှုန်းပေးရတယ်။ ဧပြီတလတည်းရဲ့ မီးဖိုးမဟုတ်ဘဲ ၄ လစာ မီးဖိုး ဆိုပြီး Back Date နဲ့ ပေးရမှာပါ” ဟု ဦးချိုကြီးက ဆိုသည်။
သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်တွင် ဆိုင်ခန်းစုစုပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် ရှိသဖြင့် လုံခြုံရေး မီတာခမှာ တဈေးလုံးအတွက် ကျပ် သိန်း ၁၀ ဂဏန်းချီ ပေးဆောင်နေရသည်ဟု သူက ပြောသည်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီက ဈေးဌာနမှူး ဦးတင်ကိုကို အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ဖြေဆိုခြင်း မရှိပေ။
ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များသည်ဈေးစည်ပင်မှသတ်မှတ်ပေးသောနေရာများတွင်သာရောင်းချရပြီး နေရာကောင်းသည့် ဆိုင်ခန်းများ အား ဈေးစည်ပင်က လေလံတင် ရောင်းစားထားမှုများလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ကျမတို့ ဆိုင်ခန်းတွေဆို ဈေးဝင်ပေါက်နဲ့ နီးတဲ့နေရာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ချောင်ကျတဲ့ အနောက်ဘက် နားလောက်ကို ပေးထားတယ်။ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင် တော်တော်များများလည်း ကျမလိုပဲ။ ဆိုင်ခန်းနေရာ ကောင်းတွေကိုတော့ ဈေးစည်ပင်က လေလံတင် ရောင်းစားဖို့ သိမ်းထားတယ်။ ဇန်န၀ါရီ လတုန်းကတောင် ဆိုင်ခန်းတချို့ လေလံတင်သေးတယ်” ဟု ငှက်ပျောသီး ပွဲရုံပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးတဦးက ပြောသည်။
ဈေးသစ်တွင် ယခင် ဈေးဟောင်းကဲ့သို့ အရောင်းအ၀ယ် မကောင်းကြောင်း၊ ဈေးသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ လာသည်မှာ ၄ လခန့် ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ပုံမှန် မဖြစ်သေးဘဲ ယခင် ၀ယ်နေကြ ဖောက်သည်များမှာ ဆိုင်ခန်းနေရာများကို မမှတ်မိသဖြင့် နီးစပ်ရာ ဆိုင်များတွင်သာ ဝယ်ယူကြသောကြောင့် နစ်နာရကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ဆက်လက်၍ သူက “ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမား စရိတ်များလည်း ယရင်ထက် ၂ ဆပို ပေးနေရတယ်။ အခုလို လမ်းမီး မီတာခတွေကို ကျမတို့ ဈေးသူဈေးသားတွေကပဲ အကုန်အကျ ခံရမယ်ဆိုတော့ အခက်အခဲ တွေ့နေကြပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
သီရိမင်္ဂလာ ဈေးသူဈေးသားများသည် ယခင် ရန်ကုန် မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်း လက်ထက်က ယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့သည် ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် အဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းမှုကြောင့် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ဈေးဟောင်းနေရာမှ ယခုလှိုင်မြို့နယ် ပိတောက်ချောင်း အနီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရသည်။
Posted by justfreeman at 13:270comments
ဓာတ်ငွေ့သယ် ရထားလမ်းအတွက် မြန်မာ-တရုတ် လက်မှတ်ထိုး
ကိုဝိုင်း | ကြာသပတေးနေ့၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၃၆ မိနစ်
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းပါ မူဆယ်-လားရှိုး ရထားလမ်းပိုင်းကို ၃နှစ်အတွင်းအပြီးတည်ဆောက်မည်ဟုမြန်မာ-တရုတ်အစိုးရများအကြားဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်သဘောတူညီ လိုက်သည်။
ကမ္ဘာ့အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရပ်ဒေသမှ ရေနံနှင့် ရခိုင်ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းရန် ရည်ရွယ်တည်ဆောက်မည့် ကျောက်ဖြူ-မူဆယ် ပိုက်လိုင်းတလျှောက် ရထားလမ်းစီမံကိန်း၏ ပထမအဆင့်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၌ ကြာသပတေးနေ့တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့်
“မူဆယ်-ကျောက်ဖြူ ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ် စီမံကိန်း” ဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ထိုးပွဲ (ဓါတ်ပုံ မြန်မာ့အလင်း)
တရုတ်အစိုးရပိုင်ChinaRailway EngineeringCorporationအကြား “မူဆယ်-ကျောက်ဖြူရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်စီမံကိန်း”ဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ထိုးပွဲကို နေပြည်တော်၌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ အထူးစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဒုသမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။
China Railway Engineering Corporation ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ Li Chang Jin ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အပြင် မြန်မာအစိုးရ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများနှင့် ရှေ့နေချုပ်လည်း တက်ရောက်ကြသည်။
လက်ရှိအစိုးရ မြန်မာ့မီးရထား ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသိန်းဆွေနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ Zhao Deyi တို့က စာချုပ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မူဆယ်-လားရှိုး ရထားလမ်းအရှည် မိုင် ၈ဝ ခန့်၊ တံတား ၄၁ စင်း၊ ဥမင်လိုဏ် ၃၆ ခု၊ ဘူတာ ၇ ခု တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ တည်ဆောက်ချိန် ၃ နှစ် ခန့်မှန်းထားကြောင်း သတင်းစာက ဆိုသည်။
စီမံကိန်းကုန်ကျငွေကို ယခင် စစ်အစိုးရက တရားဝင် ကြေညာခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း တရုတ်အစိုးရပိုင် CNPCကုမ္ပဏီနှင့်မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘောဝလုပ်ငန်းတို့အစုပိုင်သည့်ရေနံပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ရေးအတွက်ပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅ဝဝ ခန့်ကျော် ကုန်ကျမည်ဟု ရွှေဂတ်စ် လှုပ်ရှားမှု ရခိုင်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
တရုတ်လောင်စာပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီChinaPetroleumPipelineBureau(CPP)ကတာဝန်ယူ တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး မဒေးကျွန်းမှ စတင်မည့် မြန်မာ-တရုတ် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ကာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ မူဆယ်မှ ဝင်ရောက်မည်။
“ပိုက်လိုင်းက ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက လားရှိုး-မူဆယ်ကားလမ်းရဲ့ အရှေ့ဘက်အတိုင်း ဆင်းလာပြီး၊ ၁ဝ၅ မိုင်နားကနေ ဝမ်တိန်မြို့ဘက်၊ ကြူကုတ်-ပန်ဆန်းနဲ့ မူဆယ်မြို့ကြားကနေဝင်မှာ။ ရထားလမ်းက ရွှေလီအထိ ရောက်မယ်” ဟု တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပိုက်လိုင်းဖြတ်မည့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမှ တရုတ်နယ်စပ်ဆင်းသည့် လမ်းကြောပေါ်တွင် ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင်တပ်နှင့်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA တပ်မဟာ ၄ တို့ အခြေစိုက် လှုပ်ရှားနေသော်လည်း တရုတ်အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံရေး ပျက်မည်ကို လိုလားကြမည် မဟုတ်ဟု သူက သုံးသပ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်တွင် ပိုက်လိုင်းဖြတ်မည့်လမ်းနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် မြေယာများကို သိမ်းဆည်းရာ၌ နစ်နာသူများ ရှိသော်လည်း ရမ်းဗြဲကျွန်း ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ကိုမူ ကြိုဆိုသည်ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဦးအေးမောင်က ပြောသည်။
“ဒါပေမဲ့ ကျောက်ဖြူမှာ ရခိုင်လူထု ပျောက်ပြီးမှ မန္တလေးလိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာ၊ တရုတ်မြို့ကြီး ဖြစ်သွားပြီးရင် ရခိုင်တွေက တောင်ကုတ်လို ဂျိုင့်တွေ၊ တောင်တွေကြားကို ရောက်သွားပြီး လုပ်စားရမဲ့ ကိုင်စားရမဲ့ ဖြစ်သွားမှာကို ကျနော်တို့ ကြောက်ပါတယ်” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူမြို့နှင့် မဒေးကျွန်းတို့၌ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ ရေနံသိုလှောင်ကန်စခန်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သိုလှောင်ရေးစခန်း၊ ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စက်ရုံ စသည့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပြီး ကိုရီးယားပိုင် ဒေဝူးကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများက စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်း အပြီးသတ်မည်ဟု တရားဝင် သတင်းများက ဆိုသည်။
အစိုးရအသစ်၏ အထူးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်း “တပ်မတော် အစိုးရ” လက်ထက်က မပြီးပြတ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများကို ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်အတွင်း ပြီးပြတ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။
တရုတ်နယ်စပ် မူဆယ်ဘက်တွင်မူ ရထားလမ်းသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားမှု မရှိသော်လည်း သံမဏိပိုက်လုံးရှည်များ ၁ဝ ဘီးကားများဖြင့် မြန်မာဘက် တင်ဆောင်နေသည်ကို ယခင်လမှစ၍ သတိထားမိသည်ဟု ဦးအောင်ကျော်ဇောက ပြောသည်။
Posted by justfreeman at 13:110comments
Posted by justfreeman at 13:030comments
ကျော်ခ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၃၇ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း သုံးခွမြို့နယ်မှ အသက် ၅ဝ ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီး ၂ ဦးက ၎င်းတို့ကို မြေကျင်းပေါင်း ၃ဝ တူးခိုင်းသည့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အတွင်းရေးမှူးကို အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ထံ လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက တိုင်ကြားခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ပိုင်းခရိုင် သုံးခွမြို့နယ် သဲကုန်းတူးမြောင်းကျေးရွာသူ ဒေါ်မြင့်သန်းနှင့် တနှစ်ကျော်ကြာ ကွာရှင်းပြီးခင်ပွန်းဟောင်းတို့အချင်းများသည်ကိုဆူပူမှုဟုဆိုကာဒဏ်ပေးသည့်အနေဖြင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူဦးလှရီက အနက် ၁ ပေ၊ အကျယ်၁ဝပေကျယ်ဝန်းသော မြေကျင်းများ တူးခိုင်းခဲ့သည်။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို အရေးယူအပြစ်မပေးသော်လည်း ထိုအခင်းဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း ဒေါ်မြင့်သန်း၏ ညီမဖြစ်သူ ဒေါ်ဝင်းက အမဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီပြောဆိုခဲ့သဖြင့် မြေကျင်းတူးရာတွင် ပူးတွဲဒဏ်ပေးခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးများနှင့်မမျှတသည့်အဆိုပါပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို မခံနိုင်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ တိုင်တန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် ဒေါ်မြင့်သန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“စစခြင်း ကျမတို့ကို မြေကျင်း ၅ဝ ကို ကိုယ်တိုင်တူးခိုင်းပါတယ်။ ကျမတို့က မိန်းမသားလည်း ဖြစ်တယ်၊ သက်အရွယ်အရလည်းမလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ရွာထဲကလူကြီးတွေကလည်းဝိုင်းအသနားခံတယ်။ အဲဒါနဲ့ ၃ဝ ပဲ တူးခိုင်းတယ်။ ကျမတို့က မတူးနိုင်တော့ လူငှားပြီး ၃ ရက်ထဲ အပြီးတူးပေးရတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
မြေကျင်းတူးခအဖြစ် တကျင်းလျှင် ၁၅ဝဝ ကျပ်ဖြင့် လူငှားတူးခဲ့ရပြီး အဆိုပါ လုပ်အားခများကိုလည်း ကျပ် ၁ဝဝကို၁၅ကျပ်တိုးဖြင့် ချေးငှား၍ တူးခဲ့ရကာ ယခုတိုင် အကြွေးမကျေသေးဟု ဆိုသည်။ ဒေါ်မြင့်သန်းသည် ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ် ရောင်းချသူဖြစ်ပြီး၊ ခင်ပွန်းနှင့် ကွဲကွာခဲ့စဉ်က ကလေး ၄ ယောက်ကျန်ခဲ့ကာ ယခုအခါ ညီမဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ဝင်းနှင့်အတူ နေထိုင်ကြသည်။
အခင်းဖြစ်စဉ်မှာတနှစ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းကာယကံရှင်ဖြစ်သူများမှာတရားဥပဒေအရ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် သုံးခွမြို့ပေါ်ရှိ မြို့နယ် မယက (ယခု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာရုံးသို့ သွားရောက် တိုင်တန်းခဲ့သော်လည်း အရေးယူခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
သုံးခွမြို့ပေါ်ရှိအမျိုးသမီးရေးရာရုံးသို့သွားရောက်တိုင်တန်းရာတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌကလုပ်အားပေးစေခိုင်းခြင်းသာ ဖြစ်သဖြင့် ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေး၍ မရကြောင်း ပြောဆိုသလို မယကရုံး တာဝန်ရှိသူများကလည်း ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်သဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လူငယ်များ၏ အကူအညီဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ILO ထံသို့ တိုင်ကြားနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒေါ်မြင့်သန်းက ပြောပြသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် လိုက်လံကူညီပေးနေသည့် သုံးခွမြို့နယ် NLD လူငယ် ကိုရင်အေးက “ဒီအမျိုးသမီးတွေက တခုလပ်၊မုဆိုးမတွေ။သူတို့ကမကျေနပ်လို့သာဇွဲရှိရှိနဲ့တိုင်နေတာ။စီးပွားရေးကလည်း အဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ အကူအညီတောင်းလာတဲ့အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ရုံးချုပ်က ရှေ့နေရှေ့ရပ်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဒေါ်မြင့်သန်းနှင့်ဒေါ်ဝင်းတို့၂ဦး၏တိုင်ကြားချက်များကို ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ ILO ရုံးအနေဖြင့် ရရှိထားပြီးဖြစ်ကာ၊ စိစစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထိုရုံး၏ တာဝန်ရှိသူတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ဒီကိစ္စမှာ ကျနော်တို့ သိရသလောက်တော့ အတွင်းရေးမှူးက လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာထက် ပိုပြီး လုပ်ထားတဲ့ သဘောပါ။ ဒီအတွက် ကျနော်တို့ဘက်က ဒီကိစ္စကို ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ” ဟု သူက ဆိုသည်။
ILO အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓမ္မလုပ်အားပေး ကိစ္စများ တိုင်ကြားရေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပါဝင်သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် နေပြည်တော်၌ နောက်ထပ် တနှစ်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။
စာချွန်လွှာထဲတွင် အတင်းအဓမ္မခိုင်းစေမှုကို ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် ကိစ္စအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ အကယ်၍ ယခင်က ဥပဒေများသည် အတင်းအဓမ္မ ခိုင်းစေမှုကို အားပေးသလို ဖြစ်နေပါက ထိုဥပဒေများအား ပြင်ဆင်ရန်နှင့် ရုပ်သိမ်းရန်၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိနေသည့် အဓမ္မ လုပ်အားပေး ပပျောက်စေရေးအတွက် အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ကျူးလွန်သူများကို အရေးယူသည့် ဥပဒေ အပါအဝင် အဓမ္မခိုင်းစေမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေများ အသုံးချမှုနှင့် လိုက်နာမှုများ မြင့်တက်လာစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်တို့ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် ကျော်ကြားသည့် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးသည် သူမနေထိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်း ကော့မှူးမြို့နယ် ထန်းမနိုင်ကျေးရွာ၏ ရယက ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဆယ်အိမ်မှူးများကို ယခုကဲ့သို့ တိုင်တန်းခဲ့ရာ အာဏာပိုင်များကို ခြိမ်းခြောက်ကြိမ်းဝါးသည်ဟူသည့် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
Posted by justfreeman at 12:520comments
ထွန်းထွန်း | ကြာသပတေးနေ့၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၁၇ မိနစ်
ခေတ်သစ်နည်းပညာကမ္ဘာမှာ ပညာဗဟုသုတနဲ့ သတင်းအချက်အလက် ရှာဖွေရေး၊ အချိန်တိုအတွင်း အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့လွတ်လပ်တဲ့အတွေးအမြင်စာစုတွေကိုအများသူငါဆီမျှဝေတင်ပြနိုင်ရေး အတွက် အင်တာနက်ဟာ မရှိမဖြစ်အသုံးတည့်ရုံသာမက မြန်မာနိုင်ငံလို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နိမ့်ကျတဲ့ နိုင်ငံမျိုးမှာ ပိုပြီးလိုအပ်တယ်လို့တောင် ဆိုသူတွေ ရှိပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုNDF ပါတီရဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးကလည်း အင်တာနက်ဟာ ကနေ့ကမ္ဘာအပြင် မြန်မာတွေအတွက်ပါ အဓိကလိုအပ်လာပြီလို့ ရှုမြင်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူအနည်းအများအပေါ်စောဒကတက်ဖွယ်ရှိပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ အင်တာနက်ဟာ မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအတွက်အရေးကြီးမကြီးကမေးခွန်း ထုတ်စရာပင်။
“ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာမှာအင်တာနက်မသုံးဘူးဆိုရင် အကန်းနဲ့ တူမှာပေါ့။ မျက်မမြင်နဲ့ တူမှာပေါ့။ ကျနော်တို့က ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ မျက်စိဖွင့်၊ နားစွင့်ပြီးတော့ နေဖို့ လိုတယ်လေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Information ဆိုတာက ရနိုင်လေ၊ ကောင်းလေပဲ။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲနေလဲ။ ဒီဟာတွေကို ကျနော် ယူပါတယ်။ နောက်တခုက လွှတ်တော်မှာ ကျနော် တင်သွားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီ Data (အချက်အလက်) တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေ သုံးပါတယ်၊ ယူပါတယ်” လို့ ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးက သူ့အတွက် အင်တာနက် အသုံးတည့်ရပုံကို နမူနာတခုပြ ပြောပါတယ်။
လွှတ်တော်ကိစ္စအတွက်သာမဟုတ်ဘဲပြည်တွင်းပြည်ပချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှု လုပ်ငန်းတွေမှာပါ အသုံးဝင်ပါတယ်လို့ ပြောသူကတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ ပါတီဝက်ဆိုက်ထောင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းတင်ပါ။
“ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဟာ ပိုပြီးတော့ နည်းနည်းလေး ကောင်းမွန်လာတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒါ့ထက် ပိုပြောနိုင်တာက ကျနော်တုိ့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာတော့ အများကြီးကို အကျိုးရှိတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဝက်ဆိုက်ဆိုရင် ဖတ်တဲ့သူတွေ၊ အကြံပေးတဲ့သူတွေ အများကြီး ပေါ်လာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ NLD ဝက်ဆိုက်ကို ဝင်ကြည့်ရကောင်းမှန်း သိလာတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်ပနဲ့ ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်တဲ့ နေရာမှာတော့ အများကြီး ကျယ်ပြန့်လာတယ်”
ပါတီအတွက် အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့် သုံးစွဲရာမှာ အင်တာနက်မြန်နှုန်း လေးလံကြန့်ကြာလို့အချိန်ကုန်လူပန်းသလိုအစိုးရပိတ်ပင်ကန့်သတ်ချက်များလွန်းလို့လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ ညည်းတွားသံတွေကလည်း စိန်ခေါ်နေပြန်ပါတယ်။
“အဓိကကတော့ကျနော်တို့ဆီမှာနှေးတာပါ။ကွန်နက်ရှင်မိအောင်လို့အတော်ကြိုးစားရပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်လေးမိလို့သုံးနေတုန်းရှိသေးပြန်ပြုတ်သွားတာပေါ့လေ။ဒီအပေါ်မှာ အချိန်ပေးရလွန်းအားကြီးတယ်ပေါ့။ကွန်နက်ရှင်နည်းတာရယ်၊သုံးရတဲ့အခါမှာနှေးတာရယ်။ဒါက အဓိကပါပဲ” လို့ ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး ပြောပါတယ်။
၂ဝ၁ဝအထိInternetService Provider (ISP) နှစ်ခုပဲ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန ISP ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် အစိုးရဌာနတွေအားလုံးနဲ့ ADSL/Dial-up စနစ် သုံးစွဲသူတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ရတနာပုံတယ်လီပို့စ်ပိုင်ISPကတော့Dial-up,ADSL,FTTH, Wireless/Boradbandစနစ်နဲ့သုံးစွဲသူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်လို့ပြည်ပအခြေစိုက်မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂBMAရဲ့ “အမျိုးသားအဆင့် ရတနာပုံ မြန်မာWebPortal- ဖွံ့ဖြိုးမှုလော? ဖိနှိပ်မှုလော?” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစိုးရကဘယ်လိုပဲတားဆီးပိတ်ပင်ပေမယ့်ကျော်လွှားအသုံးပြုနေသူတွေ ရှိနေပါသတဲ့။ အကြောက်တရားနဲ့ ပိတ်ပင်မှုကို ကျော်လွှားမယ့် သူတွေကတော့ ဒီကနေ့ခေတ် လူငယ်တွေ၊ ပညာတတ်တွေပါလို့ ဦးဝင်းတင်က ဆိုပါတယ်။
Posted by justfreeman at 12:430comments
Posted by justfreeman at 16:410comments
ခင်ဦးသာ Tuesday, 26 April 2011 10:37
.သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန်သည် ၎င်း၏ ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လည်ပတ်မှုဖြင့် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထုတ် DhakaDailyStarသတင်းစာ၌ဧပြီ၂၂ ရက် နေ့က ရေးသားထားသည်။
ဦးသိန်းစိန်သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ မကြာမီ သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမင်းလွင်အား ကိုးကား၍ သတင်းစာက ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး မည်သည့်ရက်တွင် လာရောက်မည်ဆိုသည်ကို မသိရ သေးပေ။
ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သော မြန်မာအစိုးရသစ်၏ လေတပ်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းသည် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေရာ ၎င်းသည် သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန်မသွားမီ အကြိုခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေး အကဲခတ်တချို့က ဆိုသည်။သမ္မတသစ်ဦးသိန်းစိန်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ မေလ ၇ ရက်၊ ၈ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်း အဝေး(The18thAseanSummit)သို့လည်း တက်ရောက်မည့် အစီအစဉ်ရှိသည်။
မြန်မာ့လေတပ် ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၏ လေတပ်ဦးစီးချုပ် SM Ziaur Rahman နှင့် မနေ့ကတွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံ စစ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း Dhaka အခြေစိုက် မီဒီယာများက ရေးသား ထားကြသည်။
“စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ် အနေနဲ့လာတာဆိုတော့ အဓိက ဆွေးနွေးတာက စစ်ရေးကိစ္စပဲ ဖြစ်မှာပါ။ စီးပွားရေးကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေး ကိစ္စတွေကတော့ သူက အစိုးရအဖွဲ့ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဆွေးနွေးမယ့် အနေအထားမတွေ့ရဘူး”ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိရိဉ္စရာ သတင်းဌာန၏ အယ်ဒီတာ ဦးခိုင်မြတ်ကျော်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မြန်မာလေတပ်ဦးစီးချုပ်သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလေတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ အငြင်းပွားနေသည့် ရေပိုင်နက်ပြဿနာ၊ နယ်စပ်အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးမည်ဟု သိရသည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၊ ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်၊ ရေတပ်-ဒုဦးစီးချုပ် တို့နှင့်ယနေ့ တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ခရီးစဉ်သည် ၆ ရက်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသ၌ နယ်နိမိတ်အငြင်းပွားမှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိ၍ နှစ်နိုင်ငံစလုံး၏ စစ်အင်အားတိုးချဲ့ရေး ကိစ္စများကို နယ်စပ်ဒေသများ၌ အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နေကြပြီး မောင်းတောနယ်စပ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက် အခြမ်း၌ လေတပ်စစ်စခန်းသစ် တခုကို ဧပြီ ၃ ရက်နေ့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ထိုအခမ်းအနားသို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာဆီနာ ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ဖွင့် လှစ်ပေးခဲ့ပြီး “တိုင်းပြည်ရဲ့ လေပြင်ကိုသာမက ရေပြင်ကိုပါ ကာကွယ်ဖို့ လေတပ်ကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဖွဲ့စည်းသွားမယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာများတွင် ရေးသားထားသည်။
ပိုင်နက် အငြင်းပွားနေသော နှစ်နိုင်ငံပြဿနာကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက ဖြေရှင်းပေးရန် နှစ်နိုင်ငံစလုံးက တင်ပြထားခြင်းအား ယခုနှစ်အတွင်း အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ပေးသွားရန် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
နှစ်နိုင်ငံအကြား တည်ရှိသော ရေပြင်တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက် အများအပြား တွေ့ရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထိုရေပြင်အား သူပိုင်ကိုယ်ပိုင် အငြင်းပွားခဲ့သည့်အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ရေတပ် စစ်သင်္ဘောများ စေလွှတ်၍ စစ်ရေး တင်းမာမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောဒေသ၌ အခြေစိုက်ထားသော မြန်မာစစ်တပ်သည် နှစ်နိုင်ငံအကြား ရေပြင်၌ တည်ရှိပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံပိုင် အုန်းကျွန်းအမည်ရှိ ကျွန်း၏ အချက် အလက်၊ သမိုင်း အထောက်အထားများ ရရှိနိုင်ရန် သက်ကြီး ရခိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များထံ မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရ၏ ဒုတိယ အကြီးအကဲ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ နှစ်နိုင်ငံ အရေးကိစ္စများကိုဆွေးနွေး ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းသည် စစ်တပ်၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် တဦးအဖြစ် သွားရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ၌ ရေပိုင်နက်ပြဿနာ၊ စစ်ရေးပြဿနာ၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်လာမှု စသည့် အရေးများ ဖြစ်ပွားနေပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသ၌ မကြာမီရက်ပိုင်းက ဘာသာရေးအဓိ ကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဒေသခံ ရခိုင်၊ သက်၊ မရမာ စသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၃၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်။
Posted by justfreeman at 16:320comments
လင်းသန့် Monday, 25 April 2011 18:48
.အစိုးရသစ်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသူရဦးရွှေမန်းသည်အာဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ)၏ ဒု ဥက္ကဌ အဖြစ် မကြာခင်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ပါတီ အစည်းအဝေးမှတဆင့် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ယာယီ ဥက္ကဌ ရာထူး ကိုပါ ပူးတွဲ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေပြီဟု သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသူရဦးရွှေမန်းသည် ယခင် နအဖ စစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် တတိယ အဆင့်ရှိသူ ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ် မထွက်ပေါ်လာမီက ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးသိန်းစိန်မှာ သမ္မတရာထူး ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ခံရသည့် နေ့မှ စတင်ကာ ပါတီဥက္ကဌ ရာထူးကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီးနောက် ယင်း ပါတီ ဥက္ကဌ လစ်လပ်နေရာတွင် သူရ ဦးရွှေမန်းက ယခုကဲ့သို့ တာဝန်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နေပြည်တော် အသိုင်းအ၀ိုင်း က ဆိုသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့်နေ့မှစ၍ ရာထူး သက်တမ်း အတွင်း ပါတီအဖွဲ့အစည်း၏ ပါတီလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းအတွင်း၌ အာဏာလွန်ဆွဲပွဲများ ရှိနေကြကြောင်း၊ မကြာသေးခင်က ကျင်းပခဲ့သော ပါတီ အစည်းအဝေးတွင် သူရ ရွှေမန်းက ပါတီတွင်းမှာ“ဒီမိုကရေစီ”ရှိရန် ပြောကြားခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၏ အလွန် ယုံကြည်ရသူအဖြစ် သတင်းကြီးသူ ဦးအောင်သောင်းကမူ ပါတီတွင်း စစ်တပ်ပုံစံ စည်းလုံးမူရှိရန် အလေးထား ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ကြံ့ဖွံ့ပါတီနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ဆိုသည်။
“တသွေး၊ တသံ၊ တမိန့် ဆိုတဲ့ စစ်တပ် ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားဖို့ အရေးကြီးကြောင်း ဦးအောင်သောင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသွားတယ်”ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ယခင်က ကြံ့ဖွံ့ပါတီတွင် မရှိခဲ့သော ဒု ဥက္ကဌ ရာထူးနှင့် အတွင်းရေးမှူး(၁)၊ အတွင်း ရေးမှူး (၂)ရာထူး နေရာအသစ်များကို မကြာသေးခင်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ နှင့် ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တချို့နှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံ အပြီး ယခုကဲ့သို့ နေ ရာ သစ်များပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု နေပြည်တော်တွင် သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
အတွင်းရေးမှူး(၁)နေရာအတွက်ယခင်စက်မှု(၁)၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်း၊ အတွင်းရေးမှူး(၂) နေရာအတွက် ယခင်စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း၊ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးသိန်းဇော်တို့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နေရာအတွက် ဦးဌေးဦးက ဆက်လက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ယခင်ဝန်ကြီးဟောင်းများဖြစ်ကြသော ဦးသောင်း(သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီး) အပါအ၀င် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး နှင့် အနီးဆုံးသူများက ပါတီထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တာဝန်များကို ယူကြမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပါတီတွင်း သတင်း များက ဆိုသည်။
လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများ၏ အဆိုအရ ယခင်ဝန်ကြီးဟောင်းများနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများအကြား ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင် နေရာရရေးအတွက် အုပ်စုတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by justfreeman at 14:530comments